अन्ततः वैद्यहरु पनि चुनावमा सरिक हुनेछन् :: सूर्यबहादुर थापा (अध्यक्ष, राजपा नेपाल) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:४७ English
० तपाईंको पार्टी राजपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच एकता हुने भएको हो ?
– एकता गर्नकै लागि अधिवेशन गर्न लागेका छौँ । अधिवेशनको मूल एजेण्डा नै पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने छ ।
० अबको नेतृत्वचाहिँ कसले लिन्छ नि ?
– त्यो त अधिवेशनले नै टुङ्गो लगाउने हो । अधिवेशनको अधिकारलाई अहिले मैले बोलेर कसरी हुन्छ र ?
० मोटामोटी सहमति त भएको होला नि क–कसले के–के जिम्मेवारी लिने भनेर ?
– त्यो गरिराख्नुपर्ने कुरा होइन । अधिवेशनमा जुटेका सबैको राय–सहमतिबाट हुने कुरा हो । अहिले नै फलानो अध्यक्ष, ढिस्कानो महामन्त्री भनेर तोक्ने कुरा सम्भव पनि छैन । अधिवेशनका प्रतिनिधि, जिल्ला सभापतिहरू सबैसँग विचार–विमर्श गर्दा जस्तो राय आउँछ त्यसैबाट सबै कुरा तय हुन्छ । नेतृत्व भनेको दुई–चारजना कोठामा बसेर टुङ्गो लगाएर लाग्ने कुरा होइन क्या । प्रतिनिधिहरूको अधिकारको विषयलाई हामी दुई–चारजनाले टुङ्गो लगाउन थाल्यौँ भने त राम्रो सन्देश जाँदैन नि ।
० अध्यक्षमा तपाईंको विकल्प त छैन भनिएको छ नि ?
– मेरो विकल्प छैन भनेर भन्नु अतिसयोक्तिपूर्ण कुरा हो । पार्टी नेतृत्वको सवालमा एक व्यक्ति निर्विकल्प हुने कुरा कहीँ पनि आउँदैन । जिल्ला–जिल्लाबाट नयाँ युवाहरू कति निस्किरहेका छन्, मौजुदा केन्द्रीयस्तरमा पनि साथीहरू प्रशस्तै छन् नेतृत्व चलाउन सक्ने । त्यसैले विकल्प निस्कन नसक्ने भन्ने छैन । अध्यक्षमा हामीबीच विवाद हुँदैन । कसले नेतृत्व लिने भन्नेमा हामीबीच होडबाजी पनि छैन । प्रतिनिधिहरूको चाहनामा भर पर्छ यो कुरा । सर्वसम्मत गर्न पनि सक्छन्, चुनाव गराऔँ भन्न पनि सक्छन् । त्यसैले यो कुरा अहिले मैले बोल्ने कुरा होइन भनेको मैले ।
० तपाईंहरूले संवैधानिक राजसंस्थाको विषयचाहिँ सदाका लागि छोडिसक्नुभएको हो त ?
– तपाईंले समातिराख्नुभएको छ र ? मुलुक त गणतन्त्रमा गएको होइन र ? नेपालको अन्तरिम विधानले त यो देशमा राजसंस्था छैन, बिदा गरिसकियो नै भन्छ होइन र ? यसमा अब अन्य कुरा विचार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।
० संवैधानिक राजतन्त्रलाई अलिक लगावका साथ मानिआएको शक्ति हो नि त तपाईंहरू त, त्यसबारे फेरि कुनै पुनर्विचारको प्रसङ्ग छ कि भनेर बुझ्न चाहेको नि ?
– नेपालको इतिहासका क्रममा त्यो कुरा सबैले मानिआएका हुन्, हामीले मात्रै होइन । अहिले भएका पार्टीहरू सबैले मानेका थिए । प्रचण्डले पनि मानेका थिए, बाबुरामले पनि मानेका हुन्, अरू–अरू जो–जति छन् सबैले मानेका थिए । त्यो व्यक्तिविशेष वा पार्टीविशेषले भन्दा पनि इतिहासले नै मानेको हो र परिस्थितिवश इतिहासको क्रमले छोडाएको हो ।
० तपाईं त राजसंस्थाकै कारणले राजनीतिमा यत्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको व्यक्ति हो नि, होइन र ?
– म राजनीतिमा आएको कुरा मुलुकमा राजसंस्था भएकोले सम्भव भएको अन्यथा म राजनीतिमा हुन्नथेँ भन्ने कुरा मिल्ने कुरा भएन । म राजनीतिमा आउनु थियो भने जुन शासन व्यवस्था भएको भए पनि आउने नै थिएँ होला जस्तो लाग्छ । मेरो स्वेच्छाले नै म राजनीतिमा आएको हुँ ।
० राजाहरूसँग त तपाईंको राम्रो सम्बन्ध थियो नि, होइन र ?
– हो, थियो । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सबै राजाहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, भएर के गर्ने ? इतिहासले राजतन्त्र नै छोडाइदियो मुलुकमा ।
० तपाईंले छोडेको होइन ?
– मैले के छोड्ने के समाउने ? प्रधानमन्त्री भन्ने पद सधैँभरि समातेर या ओगटेर बस्न सकिने र मिल्ने कुरा त होइन । म त्यो ओहोदामा नरहनु भनेको राजाहरूलाई छोडिदिएको भन्ने हो र ? समाउने र छोड्ने कुरा नै आउँदैन नि । मुलुकमा राजतन्त्रात्मक शासन रहँदा सबैले त्यही समातेका थिएँ भने त्यो शासन नरहँदा सबैले छोडे । यो सबैमा लागू हुने कुरा हो । राजनीतिक जीवनमा कहिले सँगै होइन्छ कहिले विछोडिनुपर्छ, यो त राजनीतिक क्रम हो र राजनीतिक जीवनका स्वाभाविक आयामहरू हुन् ।
० यसको मतलब अहिलेको स्थितिमा अब तपाईंको पार्टीले राजसंस्था स्वीकार गर्दैन ?
– मुलुकमा अहिले गणतन्त्र विद्यमान छ, सबै राजनीतिक दलहरू यही व्यवस्थाको सेरोफेरोमा आ–आफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन् भने हामी मात्रै यसबाट अछुतो कसरी हुन सक्छौँ ?
० राप्रपा नेपाल वा त्यसका अध्यक्ष कमल थापाले त राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् नि ?
– कुरा मात्र गर्नु एउटा कुरा हो देशको संंविधान मान्नु अर्को कुरा हो । मुलुकको संविधान मानेका छन् कि छैनन् तिनले त्यो प्रश्न सोध्नुप¥यो तिनलाई । मैले संविधान मानेको छैन, मेरो आफ्नै अलग्गै संविधान छ भन्न सक्छ राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेले ? चाहना राख्नु एउटा कुरा हो भने देशको संविधान मानेर हिँड्ने कर्तव्य अर्को कुरा हो । मुलुकको नागरिकले म संविधान मान्दिनँ भन्छ भने त्यसलाई उपचार गर्ने विधि पनि त हुन्छ ।
० नेपालमा संविधानमै लेखेअनुसार सबै कुरा भएको छ त ?
– नभएका होलान्, तर मैले जानेको त यत्ति हो कि मुलुकको संविधान भनेको सबै नागरिकले मान्नुपर्ने विषय हो । आफ्नो चाहनाअनुरूप सबै नीति–नियम वा विधिविधान बन्छ या बनेको हुन्छ भन्ने कुरा होइन । तर, इच्छाविपरीत भए पनि बहुमतले बनाएको संविधान मान्न करै लाग्छ । संविधान मान्दिनँ भन्ने को नागरिक छ, मलाई देखाइदिनुहोस् त ।
० भनेपछि तपाईंको पार्टीले राजसंस्था र नेपाललाई हिन्दू राज्य स्वीकार गर्दैन अब ?
– संविधानविपरीतका कुरा अहिले गर्दै नगर्नुहोस् । नेपालको आमूल परिवर्तन भएपछाडि कति अन्य ऐतिहासिक घटना घटिसकेका छन्, अब अन्टसन्ट कुरा गरेर हुन्छ ? वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प मैले त देखिरहेको छैन । गणतन्त्र संस्थागत भइरहेको अवस्था छ ।
० हिन्दूराष्ट्र नै चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त उठिरहेको छ नि ?
– भन्नु एउटा कुरा हो त्यसले व्यवहारमा मान्यता पाउने कुरा अर्को हो । संविधानले राष्ट्रको कुनै धर्मविशेष छैन, जसले जे मान्न मन लाग्छ माने हुन्छ भनेर स्वतन्त्र छोडिदिएको छ, अब त्यहीअनुसार चल्नु एक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । धर्मनिरपेक्षताको कुरा संविधानले गरेकाले व्यक्ति आफूलाई के धर्म मान्न मन लाग्छ माने हुन्छ । धर्म मान्ने कुरासँग राजनीतिको खास सम्बन्ध पनि हुँदैन । आफूले मानिआएको परम्परा, संस्कृति त मान्छेले त्यत्तिकै कहाँ छोड्न सक्छ र ?
० त्यसो भए हिन्दूधर्मको विषयलाई लिएर नेपालमा किन बहसहरू भएका त ?
– जे–जे बहस भएका भए पनि र नभएका भए पनि मैले त केही फरक देखेको छैन । हिजो हिन्दूराष्ट्र भनेको बेलामा पनि त्यति नै मानिएको थियो भने आज धर्मनिरपेक्ष भनेको अवस्थामा नि मान्नेले मानिरहेकै छन् । धर्म भन्ने कुरा राष्ट्रको कुरा होइन व्यक्तिगत विश्वास र आचरणको कुरा हो । यस्तो कुरामा बहस र विवाद गर्नु निरर्थक हो । विविध धर्म भएको र मान्नेहरूले स्वतन्त्रपूर्वक मानिआएको मुलुक हो यो ।
० तपाईं धर्मसँग राष्ट्रको सम्बन्ध हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर यहाँको राजनीतिमा यही विषयले महत्व पाइरहेको छ त ?
– राजनीतिमा महत्व या स्थान पायो होला, तर यही विषयले हाम्रो राजनीतिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कुरा आउँदैन ।
० तपाईंको पार्टीको भावी एकता–महाधिवेशनले मुलुकको समस्या निकासका लागिचाहिँ के सूत्र वा एजेण्डा अघिसार्छ नि ?
– निकास त निर्वाचनबाट मात्र आउने अवस्था हो अहिले । निर्वाचन भएपछि निकासको बाटो खुल्छ । निर्वाचनचाहिँ जसरी पनि हुनुप¥यो ।
० सबैले निर्वाचन हुन्छ त भनेका छन् तर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा सोचेझैँ सजिलो छैन, अझै पनि वातावरण बनेको छैन भन्छन् नि कतिपय विश्लेषकहरू, तपाईं के भन्नुुहुन्छ ?
– माहोल भनेको यस्तो विषय हो जो आज नबनेको भए भोलि बन्दै जान्छ । विस्तारै चुनावी माहोल बन्दै गएको छ । आवश्यक तयारीहरू भइरहेका छन् । विस्तारै होला, भनेकोभन्दा ढिलो होला, तर निर्वाचन त हुन्छ र हुनैपर्छ ।
० वैद्यपक्षीय माओवादीले चुनाव नहुने र हुन नदिने कुरा गरेको छ नि ?
– निर्वाचनमा मतदान सकभर सबैले गरेको राम्रो हो, तर यो करकापले हुने कुराचाहिँ होइन । कसैले भोट हाल्न सक्छन् कोही हाल्दिनँ भनेर बस्न सक्छन् । भोट नहाल्ने अधिकार पनि त हुन्छ नि नागरिकलाई । जति प्रतिशतले मतदान गर्छन् त्यसैका आधारमा निस्किएको नतिजाका आधारमा कामकुरा अघि बढ्छ ।
० सबै दल तयार नभए त्यो चुनावको महत्व या मान्यता के रहला त ?
– तयार हुँदै छन्, अस्ति विरोध गर्नेहरू हिजो तयार भए, हिजो विरोधमा रहेकाहरू आज तयार हुँदै छन्, आज विरोध गर्नेहरू पनि भोलि विस्तारै तयार भइहाल्छन् । यो मान्यताबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
० खिलराज रेग्मी नेतृत्वकै सरकारले मङ्सिरमा चुनाव गराउन सक्छ त, के लाग्छ तपाईंलाई ?
– अरू कसले गर्छ त ? चुनावकै लागि भनेर रेग्मीजीको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको छ भने फेरि चुनाव गराउन को आउने त ?
० रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ अनि मात्र मान्य हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् नि ?
– उठेका छन्, उठ्छन् । यस्ता भनाइको पछाडि कुँदेर त मुलुकको काम चल्दैन नि । चुनावी सरकारका प्रमुख भएका नाताले जसले जे भने पनि चुनाव गराउने कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्नु रेग्मीजीको कर्तव्य हो ।
० असन्तुष्ट पक्षले वार्ताका लागि त्यो विषयलाई महत्वपूर्ण सर्तका रूपमा अघिसारेका छन्, यसलाई उपेक्षा गरेर कसरी अघि बढ्न सकिएला त ?
– असन्तुष्ट पक्षले सर्त राख्नु कुनै अनौठो विषय होइन । सर्त राखेकैले त वार्ता गर्नुपरेको नि ।
० मोहन वैद्य नेतृत्वको दलले भाग नलिए पनि चुनाव हुन्छ नेपालमा त्यसो भए ?
– उहाँहरूले भाग लिए अत्यन्त राम्रो । मलाई त विश्वास छ कि उहाँहरूले पनि अन्ततः चुनावमा भाग लिनुहुनेछ । लिनुभएन भने लिनुभएन । भोटको केही प्रतिशत घट्छ । कोही बिरामी भएर, कोही फुर्सत नमिलेर पनि त मतदानमा सरिक हुन सक्दैनन् नि, अनि तिनले मत हालेनन् भनेर चुनाव नै उल्टाइरहने त ?
० चुनाव भाँड्न सक्नुहुन्न त वैद्यजीहरूले ?
– चुनाव भाँडिने–साँडिने केही हुँदैन हेर्नुस् । हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिले सामान्यतया अगाडिको कुरा छर्लङ्ग देखिरहेका हुन्छौँ । यस आधारमा विश्वासका साथ म भनिरहेको छु कि चुनाव कसैले भाँड्दैनन्, चुनाव हुन्छ ।
० चुनावमा कुनै शक्तिसँग गठबन्धन पनि गर्दै छ कि तपाईंको पार्टीले ?
– अहिले नै यसको जवाफ दिने बेला भएको छैन । समय बाँकी छ, चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा परिस्थिति हेरेर मात्र हुन्छ यो कुरा । एलाइन्सको खाँचो पर्ने देखियो भने त्यो कुरा पनि आउँछ । सम्भावना जे पनि छ ।
० पशुपतिशमशेरले त काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुन सक्छ यसपटकको चुनावमा भनेका छन् नि ?
– पशुपति, गुह्येश्वरी, भद्रकाली कस–कसले जे–जे भने मैले पनि त्यही–त्यही भन्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने त छैन नि । मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा मैले भन्ने हो । अहिले त्यसरी तोकेर भन्ने बेला भएको छैन, म भन्न सक्दिनँ ।
० मुलुकमा बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको आवश्यकता छ कि छैन ?
– त्योचाहिँ छ । निश्चय नै त्यस्तो आवश्यकता छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूबीच यस्तो एकता र सहकार्य सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । चुनावका लागि मात्र भन्ने होइन, यस्तो सहकार्य र एकताको खाँचो मुलुकमा छ र जो प्रजातन्त्रप्रति विश्वास राख्छ उनीहरूबीच मात्र यो सम्भव हुन्छ ।
० राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति अझै पनि नेपालमा छ, त्यस्तो शक्तिसँगचाहिँ सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन तपाईंहरूको ?
– सैद्धान्तिक निकटता र समभाव भएकाहरूसँग मात्र सँगै हिँड्न सकिन्छ, यो संसारभर लागू हुने मान्यता हो । यस्ता कुरामा मैले अहिले व्यक्तिगत विचार दिए पनि भोलि महाधिवेशनपछि पार्टीले अर्कै कुरामा सहमति जनाउन सक्छ, अनि के भन्ने ?
० प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– नेपालको एउटा राजनीतिक दलका एक नेतालाई भारतले निम्ता ग¥यो, जानुभयो, आउनुभयो, कुनै अनौठो कुरा होइन यो । चल्दै आएको प्रक्रिया हो र चलिरहन्छ पनि । उहाँलाई प्रोटोकल्ली जे–जस्तो सत्कार गर्नुपर्ने हो उनीहरूले गरे ।
० यसबाट नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कुनै नयाँ आयाम आउँछ कि एमाओवादीलाई मात्रै राम्रो भयो होला ?
– नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भनेको एउटा कुनै नेता गएर, प्रचण्ड, सुशील या सूर्यबहादुर अलग–अलग गएर फरक पर्ने विषय होइन । भारत र नेपालको सम्बन्ध त राष्ट्रले कसरी गरेको छ, त्यसमा भर पर्दछ ।
२७ बैशाख २०७०, शुक्रबार ०७:४४ मा प्रकाशित